Echefukwala discuss University of Ulm
The University of Ulm bụ chronologically nke itoolu na Baden-Wuerttemberg. The mbụ echiche nke okobot a mahadum dị na Ulm-aga azụ ka 50. na 1959, ndị òtù nnyocha “University of Ulm” e hiwere, nke-emepụta a memorandum on okobot a mahadum dị na March nke 1961. N'ihi na asọmpi n'etiti obodo nile nke Constance na Ulm ná mmalite nkebi, echiche nke guzosie ike a mahadum na onye ọ bụla nke obodo abụọ nweela ewu ewu. A oké egwu ihe na-eduga na a mkpebi bụ na Constance dị ná ngwụcha ngwụcha a gọọmenti etiti ókè-ala. The ohere maka ọrụ na nkà mmụta ọgwụ agaghị ezu n'ihi na enweghị nke onye ọrịa catchment n'ógbè na ókè-ala. Echiche nke okobot a mahadum dị na Ulm mere ghọrọ ọzọ ihe – ọ ga-abụ a mahadum ekara site na nkà mmụta ọgwụ na eke na sayensị.
Na July nke 1965, ntọala kọmitii rubere ya “Memorandum on a College of Medicine na Natural Sciences na Ulm,” nke e mma site na steeti Baden-Wuerttemberg si Council nke Ozi na January 1966. Nanị ọnwa abụọ mgbe e mesịrị, na “Obere Ụkpụrụ Iwu nke Ulm College of Medicine na Natural Sciences” bịara mmetụta.
Ị chọrọ discuss University of Ulm ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews